जनकपुर चुरोट कारखानाको बाटोमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
९०५ पटक पढिएको
साथी बलबहादुरजीलाई गाडीले हिर्काएर खुट्टा भाँचिएको थियो । अप्रेसन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि केही दिनदेखि अस्पतालसँग दैनिक सम्पर्क गर्दै थिएँ । त्यसै सन्दर्भमा मैले एक जना डाक्टरसँग सम्पर्क गरेर त्यो खुट्टाको अप्रेसन गर्ने बारेमा कुरा गरेंँ । डाक्टरले सुगर ठीक ठाउँमा आएमा अप्रेसन गर्ने भनेका थिए ।
मैले डाक्टरलाई ‘तपाईले न्युज ट्वान्टी फोरको रिपोर्ट (समाचार) हेर्नुभयो’ भनी सोधेँ, उनले नहेरेको जवाफ दिए । बिरामीले गराएको परीक्षणको रिपोर्ट नआएको अनि परीक्षणका लागि चाहिने सामग्री छैन भनेर पन्छाउने गरेको भनी समाचारमा आएको बताएँ । त्यस्तै, बिरामी दर्ता गर्ने काम बिहान ९ बजे नै सकियो भनी त्यसपछि आउनेलाई पेइङ ओपिडीमा पठाइने गरेको समाचारमा उल्लेख भएको बताएँ ।
टाढाबाट आएका बिरामीलाई समस्या पर्ने गरेको तथा अप्रेसनका लागि दिइएको मितिमा अप्रेसन नहुने गरेको समस्या रहेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो । सर्वसाधारणहरू बिरामीको नाम दर्ताका लागि लाइनमा बसिरहँदा त्यहीँका कर्मचारीले भने सर्वसाधारणलाई हप्काउँदै लाइन नलागी पूर्जा लिई विकृति बढाएको तथ्य पनि त्यसमा देखाइएको थियो ।
भिडियो रिपोर्टसहितको विवरण देखाई डाइरेक्टरलाई समेत प्रश्न सोधेको थियो भनेर भनेपछि डाक्टरले ‘अरु पनि थप केही भन्यो ?’ भनी जिज्ञासा राखे । रवि लामिछानेले रिपोर्टको भूमिकामा एशियाकै नमूना अस्पताल भए पनि धेरै अनियमितता हुने गरेको अस्पताल भनेका थिए । पेइङमा भन्ने बित्तिक्कै डाक्टर पनि हाजिर हुने तर सामान्य जाँच गर्नुपर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको भनिएको थियो । आउटडोरबाट जाने बिरामीले ठूलै सास्ती बेहोर्नुपर्ने भनी अस्पतालको भद्रगोलको नमुना पेश गरेका थिए भनी डाक्टरलाई जानकारी गराएँ ।
मेरो भनाइपछि डाक्टरले भने, ‘यो अस्पताल राजनीति गर्ने थलो भएको छ । यो अस्पतालका कर्मचारी यहाँ राजनीति गर्न आएका छन् । यिनीहरूले आफ्नो पेशालाई मर्यादित बनाउने होइन, यहाँ बिरामीको हेरचाह गर्ने होइन, आफ्नो स्वार्थ कसरी पूरा हुन्छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर काम गर्छन् । अनि रिपोर्टमा देखाएजस्तो सबथोक भएको हो ।
यहाँको व्यवस्थापनले राम्रो गरेको भए अहिलेसम्ममा साँच्चै एशियाकै नमुना हस्पिटल बन्ने थियो तर सबैले यहाँ आएर राजनीति गरे । सबैले यहाँ आएपछि हस्पिटललाई आफ्नो स्वार्थमा कुदाए । अब यो अस्पताल छिटै जनकपुर चुरोट कारखानाजस्तो भएर बन्द हुन्छ ।’
उनको कुरा सुनेर म झस्किएँ । जनकपुर चुरोट कारखाना नेपालको नमूना चुरोट कारखाना थियो । त्यसले नेपाललाई अरबाँै कर ति¥यो । थुप्रै किसानले सूर्ति खेतीबाट लाभ उठाए । जनकपुर चुरोट कारखानाले उत्पादन गरेको चुरोटले देशभरका चुरोट सेवनकर्तालाई पुग्यो । व्यापारीले समेत फाइदा लिए ।
बिस्तारै त्यो कारखाना राजनीति गर्ने थलो बन्यो । सरकार फेरियो । चुरोट कारखानासम्बन्धी ज्ञान भएका मानिस होइन आफ्ना मानिसलाई ल्याएर महाप्रबन्धक बनाइयो । उसले ४ जना मन्त्रीका मानिस, ४ जना आफ्ना मानिस, ५ जना प्रधानमन्त्रीका मानिस राखिदिनुपर्ने भयो । अनि उनीहरू कसैले काम गर्नै नपर्ने । उनीहरूलाई कसैले काम लगाउन पनि नसक्ने । जसले काम लगाउन अघि सर्छ भोलि उसैको जागिर जाने खतरा भयो ।
मौका परे उनीहरू नै दैनिक ५÷६ बट्टाका दरले चुरोट लिएर हिँड्न थाले । यसरी जनकपुर चुरोट कारखानालाई अन्त्यमा सिध्याएर छाडे । आज त्यो कारखाना प्रदेश सरकारका मन्त्रीको आवासगृह भएको छ । नमूना भनिएको चुरोट कारखाना यसरी सिद्धियो कि यसमा न नागरिकको चिन्ता रहयो, न त राज्यको नै । सबैलाई मस्ती भयो । आखिर त्यहाँबाट ५ किसिमका मानिसको रोजगारी गुम्यो ।
पहिलो, सूर्ति उत्पादक किसानको, दोस्रो, त्यहाँ काम गर्ने हजारौँ कामदारको, तेस्रो त्यहाँबाट व्यवसाय गर्ने व्यापारीको, चौथो, त्यहाँ वरिपरि व्यापार गरेर बस्ने व्यापारीको, पाँचौँ, त्यहाँका कामदार कर्मचारीले भाडामा प्रयोग गर्ने घरधनीको । यसरी एउटा कारखाना बन्द हुँदा देशले घाटा बेहोर्नुपर्यो । आखिर त्यहाँ सरकारले राम्रो मानिसलाई होइन आफ्नो मानिसलाई पठाएपछि यस्तो भएको हो ।
डाक्टरको कुरा सुनेपछि बीपी प्रतिष्ठानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? यसका बारेमा चिन्ता लिनुपर्ने हामीले होइन र ? हामी सबै मिलेर अब केही गर्नुपर्छ भनेँ । डाक्टरले प्रतिष्ठानभित्रका खराब मानिसका कारण कसैलाई छुन नसकिने बताए । महिना दिनको हाजिर एकै दिन गर्ने अनि रातिको ड्युटी हुनेहरू नआउने र कसैले कसैलाई नटेर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । यहाँको सिस्टम धेरै बिग्रिएकाले सप्रिन समय लाग्ने डक्टरको भनाइ थियो ।
‘केही न केही उपाय त पक्कै होला नि ?’
उनले भने, ‘यहाँ राम्रो मानिस कोही ल्याउन चाहँदैनन् । राम्रो मानिस ल्याएर यहाँका धेरै मानिसलाई कटौती गरी हटाइदिनुपर्छ । लामो समयसम्म इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने आशा गर्न सकिन्छ । तर अब यहाँका मानिसले यसलाई बनाउँदैनन् सिध्याउँछन् मात्र,’ ती डक्टरले बडो गम्भीर भएर भने, ‘यत्रो ठूलो अस्पताल एक दिन खण्डहरमा परिणत हुने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ । यहाँ यति धेरै उपकरण छन् । केही मेसिन नचलाएर अनि केही मेसिन चाहिँ चलाउने मानिस नभएर थन्किएका छन् । बुढापाकाले भन्ने गर्थे, माल पाएर के गर्नु चाल नपाएपछि ? यहाँ यतिबेला त्यस्तै भएको छ । बाँदरका हातमा नरिवलजस्तै भएको छ ।’
उनका अनुसार अस्पतालमा धेरै उपकरण भए पनि बिरामीले बाहिर गएर परीक्षण गराउनुपर्ने स्थिति छ । ती डाक्टरले भनेको सुनेपछि मैले सम्झिएँ यो देशमा अरुले राम्रा उपकरण दिएका छन् तर तिनलाई चलाउने हात राम्रा भएनन् । पौरखी भएनन् ।
केही समयअघि साथीभाइ बसेर छलफलको क्रममा हामी भन्दैथियौं, ‘एकदिन यो अस्पताललाई नेपालको नमूना अस्पताल बनाउनुपर्छ । यहाँ उपचारका लागि आउने बिरामी अन्यत्र रिफर हुनु नपरोस् । तर त्यहाँभित्रकै डाक्टरको कुरा सुनेर प्रतिष्ठान साँच्चै नै बाँदरका हातमा नरिवल भएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालको इतिहासलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ यहाँ सरकारी लगानी भएका र अरुले बनाइदिएका कुनै पनि कलकारखाना, अस्पताल, विद्यालय केहीमा पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल पाइँदैन । यस्ता कलकारखानाले सत्तामा बस्ने केही मानिसहरूलाई ठूलो फाइदा भएको देखिन्छ । जुन कारखाना विदेशीले बनाइदिए ती आज निजी व्यक्तिलाई बिक्री गरिदिए । कति भने उपकरणअभावमा अलपत्र छन् । यस्ता थुप्रै उदाहरण पेश गर्न सकिन्छ । जस्तै बुटवल पावर कम्पनी, बुटवल धागो कम्पनी, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, कृषि औजार कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, विराटनगर जुट मिल सबैभन्दा पछाडि बन्द भएका कारखाना हुन् ।
यसरी राज्यको लगानी भएका यी कारखाना, अर्काले अनुदानस्वरूप बनाइदिएका कारखानाहरू सबै अहिले खिया परेको फलामभन्दा फरक छैनन् । जब मैले पछिल्लोपल्ट डाक्टरको कुरा सुनँे त्यसपछि सोचेँ, साँच्चै हामी अहिले के गरिरहेका छौँ ?’
अब पनि प्रतिष्ठानजस्ता दैनिक जनताका सरोकारका ठाउँहरू जनताबाट अलगअलग छन् । जनताले धेरै अधिकार पाए भन्दै गर्दा आज यत्रो ठूलो संस्थान यसरी धराशायी बन्दैछ । हाम्रो जीवनदाता भनेर मानिएको त्यो ठाउँ जहाँ दिनमा ३ हजार ५ सय जना भन्दा बढी बिरामीको जाँच गरी उपचार गर्न सक्ने क्षमता छ । तर अस्पतालमा ९ सयदेखि १ हजार जना बिरामी पुग्नेबित्तिकै पूर्जी बन्द हुन्छ । आफ्ना र आफ्ना नातेदारका लागि जति बजे पुगे पनि केही फरक पर्दैन । स्टाफले पनि आफन्त र चिनजानका मानिसको पूर्जा अगाडि राखिदिन्छन् । यस्तो भएपछि अस्पतालले जनताको लागि कसरी सेवा प्रवाह गर्न सक्छ ?
नेपाल सरकार र पूर्वका नागरिकका लागि दाताले जुराइदिएको राम्रो संस्था हो बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । पूर्वेली जनताले गौरव हो । यो अस्पतालबाट पूर्वी नेपालका मात्रै नभई उत्तरपूर्वी भारतका र नेपालका जनताले सेवा पाउनुपर्ने थियो तर अहिले पूर्वका जनतालाई नै राम्रो सेवा दिन सकेको छैन ।
यो अस्पताललाई खण्डहर हुनबाट जोगाउने पहिलो जिम्मा धरानवासीको र पूर्वेलीको हो । यदि यो अस्पताल जनकपुर चुरोट कारखानाजस्तै भएर बिग्रियो भने धरानवासीमाथि पहिले औँला ठडिने छ । धरानवासीको गौरव यसरी धराशायी हुँदा पनि किन यसको बारेमा चासो राखिँदैन ? त्यसपछि प्रदेश १ का बासिन्दाले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
यस विषयमा सङ्घीय सरकार पनि जिम्मेवारीबाट भाग्नुहुँदैन । यो अस्पतालको अवस्था सुधार्न कुलपति लाग्नैपर्छ । पहिले कुप्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा लिनै पर्छ । तपाईं कुलपति भएर पनि अस्पतालको यो दुर्गति कसरी टुलुटुलु हेरिरहन सक्नुहुन्छ ? तपाईं कुलपति मात्रै होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री पनि हो । तपाईंको जिम्मामा जनताको स्वास्थ्य पनि छ ।
प्रतिष्ठानजस्तो संस्थामा एउटाले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई सिध्याउन लागेका छन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई कहिलेसम्म त्यहाँ दाइँ गरिरहन दिने हो ? अनि धरानवासीले कहिलेसम्म त्यो दाइँको रमिते भएर बस्नुपर्ने हो ? प्रदेशका नागरिक, सङ्घीय सरकार र सम्पूर्ण देशभरिका नागरिक मिलेर कामकाजी टिमको निर्माण गर्ने काम थाल्नुपर्छ । नत्र ती डाक्टरले भनेजस्तै प्रतिष्ठान अब छिटै जनकपुर चुरोट कारखानाजस्तै समाप्त हुन बेर लाग्नेछैन ।